अपडेट: ब्लगसप्टको समस्या सेटीगलाइ private बाट public मा लागे समाधान हुंदोरहेछ। मैले आफू खुल्लामन्चमा Blog Follower भएको उदाहरण राखेको छु। तपाइहरु www.khullamanch.blogspot.com मा गएर हेर्नु भयो भने नेपालीयन देख्नुहुनेछ। ब्लगस्पटमा Blog Follower मा केही गडबडी देखिएको छ। ब्लग स्पटले त्यसलाइ follower relationship private हुनेहरुको मात्र गडबडी भएको र relationship public राखेमा हराएका Blog Follower पुन देखीने जनाएको छ। थप जानकारीको लागी यो लिंकमा जानुहोला।
हैन धेरैजसो पब्लिक फलोवर नै छन् । मैले फलो गर्ने १००‌+ ब्लगहरु थिए तर देखाइरहेको छैन । यो समस्या हिजो राति देखि देखापरेको हो । यत्तिकै फलोवर क्लिक गर्दै हेर्दै थिँए, एकै छिन मा निकै संङ्ख्या मा फेरबदल आयो ।
mera pani sahtiharu haraye ............
ब्लगसप्टले त पब्लिक र प्राइभेट सम्बन्धका कारण भनेर अर्थाउन खोजेको छ तर ब्लगरहरुले त्यसो नभएको फरोमहरुमा भनिरहेका छन। आशा छ ब्लगसप्टले यो समस्या छिटै समाधान गर्ने छ। तपाइहरुले एक पटक फ्लोवर सेटिगंमा यता उता क्लिग गरेर हेर्नुहोस त केही भइहाल्छ कि?
I missed lots of my frns too.
मैले Publicly Follow गरेको धेरै ब्लगमा पनि 'म' छैन त? अहिले। तर नेपालीएनजीले भने जस्तै कुनै नया बल्ग(पहिला Follow नगरेको) मा अहिले Follow गर्दा भने त्यो नया ब्लगमा भने Follower देखिने रहेछ ।
अहिले त मेरा Followerहरु पनि ह्वात्तै घटेका छन र मैले Follow गरेका ब्लगमा पनि म छैन ।
To followablog it can be done as I mentioned and to modify the existing setting, we can follow Dillip Ji instruction. Thanks Dillip Ji.